Sekota: Instagram Vs. Spam
Instagram - dị ka ndị ọzọ na mgbasa ozi mgbasa ozi na ọrụ ntanetị - nwere òkè nke spam. Ihe ndekọ Spam na foto na mkparịta ụka spam. Nke a abụghị ihe ị ga-achọ ịhụ na foto gị na ndị akpadoro gị. N'ezie, ọ na-ewe iwe. Nnọọ iwe.
Yabụ, olee otu ị ga - esi wepụ spam na akaụntụ Instagram gị? Na-agụ ma chọpụta - best wall units.
Ryan Johnson, onye ọkachamara na - ahụ maka Semalt , na - akọwa otú ị ga - esi ejikwa spam na akaụntụ Instagram gị.
Malite site na ịkọ ihe ị chere na ị bụ spam
Ị maara na ị nwere ike ịhapụ ndị ọzọ na Instagram ọrụ na ihe mgbu nke na-aga site na spam kwuru na foto? Ọ bụrụ na ị na-eji iOS, kwuo na iPhone, ma ọ bụ iPad wee gaa na ngalaba nkọwa nke foto ahụ, swipe mkpịsị aka gị n'aka ekpe wee pịa akara mkpuchi (!) Mgbe ị gachara 'scam' ma ọ bụ 'spam'. Usoro a dịtụ ntakịrị na gam akporo. N'ebe a, ị gakwuuru okwu ahụ, pịa 'ehichapụ okwu ahụ ma kọọ akụkọ,' na ị mechara. Ihe ndị a na-ekwu. Ya mere, olee otu ị ga-esi kọọrọ akaụntụ Instagram na-agba gị ume na foto? Mee, pịa onodu ato ebe di n'elu akuku aka nri wee pịa 'akuko' soro ya. Gụkwuo na nke a na Ụlọ Ọrụ Enyemaka Instagram: Mmegbu na Spam.
Ị nwere ike ịtụle iji akaụntụ nzuzo
Ụfọdụ ndị na-atụle ịdebe ihe ndekọ akaụntụ profaịlụ onwe ha iji zere spam. Ọ bụ ezi ngosi, ma ọ dị mwute ikwu na profaịlụ onwe gị na-egbochi gị inweta nnukwu ihe na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, foto gị ga-egosi na hashtags. Na mgbakwunye na nke a, ụfọdụ ndị na-achọghị mmasị na-eso profaịlụ onwe ha n'ihi na ha nwere ike ịnwe ihe ijuanya. Maka nmalite, ị gaghị ahụ ihe a na-eziga ma ọ bụrụ na ha akwadoghị arịrịọ gị ka ị bụrụ enyi.
Ekwela ka e mebie akaụntụ gị
Ọtụtụ foto spam na nkọwa na akaụntụ Instagram gị nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na akaụntụ gị na-ala. Mee ka ị na-elele ihe ị na-ekwu mgbe niile maka ọrụ ọ bụla enyo. Dịka Instagram na-akọwa usoro mgbochi spam ngwa ngwa, ọ bụghị ihe nzuzu. Na-echeta mgbe nile iji lelee ihe, foto, na mkpado maka mkpesa akụkọ. Ọ dịghị onye ga-eme nke a maka gị. Gwa ma kpochapụ ha ozugbo ị hụrụ ha.